पाठहरू रोक्न कसरी सिल्टल्टबाट सुझावहरू, अवांछित इमेलहरू, र फोन कलहरू
मैक्स बेल, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छ, कि बोगस पाठहरू, अवांछित इमेलहरू, र कष्टप्रद मार्केटिङ कलहरूले तपाईंको साँझ चाँडै बर्बाद गर्न सक्छ। गत वर्ष, सूचना आयुक्तले 114,000 भन्दा बढी अनपेक्षित पाठहरू र कष्टप्रद कलहरू पठाएका थिए। तथापिको संख्या इन्टरनेटमा स्प्यामरहरूको वृद्धिको कारण लाखौंमा भाग लिन आशा गरिन्छ। तपाईंको खाताबाट बोगस टेक्स्ट सन्देशहरू र रद्दी इमेलहरू मेट्ने अनुभव मात्र समय खरिद हुने मात्र होइन महंगा।
अवांछित पाठहरु लाई कसरि रोकें
के तपाईं स्प्यामरबाट बमबारी गर्न लेखहरू प्राप्त गर्नुभएको छ? आतंकको लागि कुनै ठाउँ छैन! यदि तपाइँ आक्रमणकारीहरूबाट लेखहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तै भुक्तान सुरक्षा बीमा (पीपीआई) कार्यकारीहरूको दाबी गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई थप निर्देशन प्राप्त गर्नको लागि तपाईंको सञ्जाल प्रदायकलाई मुद्दा रिपोर्ट गर्न विचार गर्नुपर्छ। एक राम्रो नेटवर्क नेटवर्क प्रदायकहरूले स्प्यामरहरूलाई रोक्न सम्भावित ग्राहकहरूलाई नि: शुल्क तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। दुर्भावनापूर्ण पाठहरू रिपोर्ट गर्न, अज्ञात पाठ 7726 मा पठाउनुहोस् र एक वैध संख्या प्रेषक समावेश गर्दछ। प्रमुख सञ्जालहरू स्प्यामरहरू र हैकरहरूबाट हर्षित भएकाहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि अगाडि बढेको छ। नीतिहरू र मानकहरू कसरी सञ्जाल प्रदायकहरू र कम्पनीहरूले कसरी सञ्चालन गर्छन्। एक मोबाइल प्रयोगकर्ताको रूपमा, तपाईं रिपोर्ट गर्न वा एक सूचना आयुक्त कार्यालयमा उजूरी फाइल गर्न निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झौताका सर्तहरू हटाइएका कम्पनीहरूले £ 500,000 भन्दा बढि रकम भुक्तान गर्न समाप्त गरे। हालै, ब्राडफोर्डमा संचालित एक क्रेडिट कम्पनीले अन्तिम छ महिनामा लाखौँ कष्टप्रद पाठहरू पठाएपछि £ 80,000 सम्म ठीक खर्च गर्यो।
कष्टप्रद फोन कल कसरी रोक्न?
टेलिफोन प्राथमिकता सेवा (टीपीएस) स्प्यामरबाट कष्टप्रद मार्केटिङ कलहरू प्राप्त गर्नका लागि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै मद्दत भएको छ। बिक्री र मार्केटिङ रणनीतिकर्ताहरूको कलहरू रोक्न, तपाईको मोबाइल प्रयोगकर्ता नम्बरलाई टेलिफोन प्राथमिकता सेवाको साथ दर्ता गर्नुहोस्। तपाईले TPS संगठनको साथ दर्ता गर्नुभएपछि कम्पनीहरू अब तपाईंलाई कल गर्न अधिकृत छैन। यो सेवाको साथ दर्ता गर्न, तपाईंको इमेल ठेगानासँगै 85099 मार्फत "TPS" पठाउनुहोस्। केहि मिनेट भित्र, तपाईले टेलिफोन प्राथमिकता सेवाबाट पाठ पुष्टिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई डाटाबेसमा थपिएको छ। केही फोन कम्पनीले अपरिपक्व कलहरू ब्लक गर्न मद्दत गर्न पनि सेवा प्रदान गर्दछ। यद्यपि, कल-अवरोध उत्पादनको स्थापनाको आधारमा शुल्क फरक हुन सक्छ।
स्प्याम इमेल कसरी रोक्न?
स्प्यामरहरूबाट अवांछित ईमेलहरू प्राप्त गर्न प्रत्येक दिन इन्टरनेट गर्न सकिन्छ। इन्टरनेटमा स्पैमरहरूको उदय बढ्दै गएको छ। स्प्यामरहरूले प्रयोगकर्ताको डेटा डेटा पहुँच गर्न जङ्क इमेल प्रयोग गर्छन्। एक मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको रूपमा, अविश्वसनीय डोमेनबाट क्लिक गर्ने इमेलहरू क्लिक गर्न र खोल्नबाट बच्नुहोस्। तपाईंको ईमेल खातामा लिङ्क पठाइएको बेला स्पामरले एक सूचना प्राप्त गर्छ। तपाईंको ईनबक्समार्फत नजीकिएका ईमेलहरू रोक्नको लागि 'सदस्यता रद्द' बटन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईले विशेष ईमेल ठेगानाहरू बाट नियमित ईमेलहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, इमेल ठेगानाहरू रोक्न तपाईंलाई लिनको लागी उत्तम शट हो। ठेगाना रोक्न निश्चित छ कि ब्लक गरिएका ठेगानाहरूबाट अवस्थित इमेलहरू स्प्याम फोल्डरमा प्राप्त हुन्छन्।
तपाईंको एंटी-भाइरस कार्यक्रम अद्यावधिक गरी राख्दा तपाईंको मोबाइल फोन सुरक्षामा आउँदा महत्त्वपूर्ण महत्त्व हो। नम्रता कलहरू, बर्गस पाठहरू, र अवांछित ईमेलहरू तपाईंको साँझ बर्बाद गर्न नदिनुहोस्। माथिको हाइलाइट गरिएको चालहरू र सुझावहरू सुरक्षित साइडमा प्रयोग गर्नुहोस्।